सबैलाई चकित पार्दै यी महिलाले यसरी मनाइन डिभोर्स उत्सव, सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर भाइरल — sancharkendra.com
सबैलाई चकित पार्दै यी महिलाले यसरी मनाइन डिभोर्स उत्सव, सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर भाइरल
काठमाडौं । बिहेपछि मानिसहरुले भोज तथा उत्सव गर्नु त स्वभाविकै हो । तर, अमेरिकामा एकजना महिलाले आफ्नो डिभोर्सपछि उत्सव मनाएकी छिन् । उनको डिभोर्स उत्सव मनाउने तरिका पनि निकै अनौठो छ ।
आम रुपमा मानिसहरुका लागि डिभोर्स दुखदायी हुन्छ र डिभोर्सपछि उदास र हतास बन्दछन् । तर, अमेरिकको साउथ क्यारोलिनामा बस्ने मेरी लोलिसका लागि डिभोर्स जीवनकै खुसीको क्षण बन्यो । उनले डिभोर्सपछि खुब उत्सव मनाइन् ।
त्यसक्रममा उनले आफ्नो बिहेका फोटो पनि जलाइदिइन् र गज्जबको फोटोशूट गरिन् । उनका डिभोर्स फोटोशूट सोसल मिडियामा भाइरल बनेका छन् । कतिपय मानिसहरुले निकै तारिफ पनि गरेका छन् ।
उनले बिहेको फोटोलाई खुट्टाले कुल्चिएर पनि फोटोशूट गरेकी छिन् । जीवनमा हरेक सम्बन्ध जोडिँदा मात्र होइन तोडिँदा पनि उत्सव मनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सोही कारण आफूले यसरी फोटोशूट गरेको उनी बताउँछिन् । तर आफ्नो डिभोर्स फोटोशूट यतिधेरै भाइरल होला भनेर आफुले कल्पना नगरेको उनले बताएकी छिन् ।
यस्तै अर्को प्रसंग- स्कुले जीवनमा सजायस्वरुप कान समाएर उठबस गर्नुपरेको अनुभव हामी धेरैको छ होला । स्कुलमा विद्यार्थीलाई दिइने सजायमध्ये यो सबैभन्दा सहज र कम पीडादायक पनि हो ।
यसले विद्यार्थीलाई शारीरिक रुपमा धेरै पीडा नदिएपनि मानसिक रुपमा लज्जित बनाउने र गल्ती नगर्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वास शिक्षकहरुको हुन्छ । तर, कान समाएर उठबस गराउने त्यो विधि केवल सजाय मात्र होइन रहेछ । त्यो त दिमागी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने रहेछ ।
केही समयअघि गरिएको एक अध्ययन अनुसार कान समाएर उटबस गर्नाले सरीरमा विभिन्न खालका फाइदा पुग्दछन् । यो सजाय नभै योगाजस्तै हो । प्राचीन समयमा गुरुकुलमा सबै विद्यार्थीलाई यस्तै योगाभ्यास गराइन्थ्यो ।
उठबस गर्दा कानको तल्लो भागमा समाउँदछौँ । उक्त भागमा विशेष एक्यूप्रेसर प्वाइन्ट हुन्छ । त्यसैले त्यस ठाउँमा समाउँदा उक्त विन्दुमा दबाब पर्दछ । यसले मस्तिष्कका केही विशेष तन्त्रिकामा सक्रियता बढाउँदछ । यसले मस्तिष्कको कसरत हुन्छ । यसबाट मस्तिष्कको कार्यदक्षता बढ्दछ ।
कान समाएर उठबस गर्दा मेमोरी कोषिकामा रक्तप्रवाह तीव्र हुन्छ । मस्तिष्कको बायाँ र दायाँ हिस्साको कार्यप्रणालीमा सामाञ्जस्यता स्थापित हुन्छ । यस कारणले मन शान्त हुन्छ, एकाग्रतामा वृद्धि हुन्छ र स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी हुन्छ ।
हामीकहाँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिने यो सजायलाई विदेशतिर सुपर ब्रेन योगा पनि भनिन्छ । मानिसहरु मस्तिष्कलाई शान्त राख्नका लागि यो योगा गर्दछन् । एजेन्सी
२०७५ चैत २५ गते प्रकाशित
सहकर्मीले पादेर हैरान बनाएको भन्दै मुद्दा दायर, २० करोड क्षतिपूर्ति माग
जुम्ल्याहा बच्चाका फरक-फरक बाबु, कसरी भयो सम्भव ?
किन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? यस्तो अच्चमको छ कारण
कक्षा ‘बंक’ गरी चलाएको अभियानले १६ वर्षीया किशोरी नोबेल शान्ति पुरस्कारको मनोनयनमा
नेपालमै यस्तो- पूर्वाञ्चल टपर छोराको बिहेमा बुवाले गरे दुईवटा प्लेन चार्टर, दुलही पक्ष दंग